Indawo Yokukhiqiza I-cookware I-Cast Iron - Abakhiqizi BaseChina base-China I Iron
Imininingwane Yomkhiqizo: I-JT 4002A Material: Usayizi we-Cast iron: 22 * ​​2.9 Ukupakisha: ibhokisi lesipho noma ibhokisi elinsundu Ukuchazwa komkhiqizo: Ukukhanya okuphelele bushelelezi nekhwalithi yendawo yomfaniswano kuyo yonke imikhiqizo ngoba umzimba olingayo wenziwa ngumugqa wokubumba owenziwe nge-DISA.
Imininingwane Yomkhiqizo: JT 6250, JT7251 Material: Cast iron size: 16 * 3.8, 18 * 4.3 Ukupakisha: ibhokisi lesipho noma ibhokisi elinsundu Ukuchazwa komkhiqizo: Umugqa ophansi obushelelezi kanye nekhwalithi yaphezulu yomfaniswano kuyo yonke imikhiqizo ngoba umzimba wokuphonsa wenziwa yi-DISA auto umugqa wokubumba.
Imininingwane Yomkhiqizo: I-JT 60W, JT 63 W Material: Usayizi we-Cast iron: 22.8 * 2, 24.5 * 1.8 Ukupakisha: ibhokisi lesipho noma ibhokisi elinsundu Incazelo yomkhiqizo: Umugqa ophansi obushelelezi kanye nekhwalithi yaphezulu yomfaniswano kuyo yonke imikhiqizo ngoba umzimba wokuphonsa wenziwa DISA auto wokubumba umugqa.
Imininingwane Yomkhiqizo: I-JT 70, JT 72, JT 71 Material: Usayizi we-Cast iron: 16.5 * 4.2, 20.5 * 4, 25 * 4.6 Ukupakisha: ibhokisi lesipho noma ibhokisi elinsundu Ukuchazwa komkhiqizo: Umphezulu omuhle wekhwalithi kanye nekhwalithi yaphansi yomfaniswano kuyo yonke imikhiqizo ngoba umzimba ophonsayo wenziwa yi-DISA auto wokubumba ulayini.
Imininingwane Yomkhiqizo: I-JT 140, JT 190 Material: Usayizi we-cast iron preseasoned size: 15 * 2.9, 19.5 * 4.5 Ukupakisha: ibhokisi lesipho noma ibhokisi elinsundu Ukuchazwa komkhiqizo: Umugqa ophansi obushelelezi kanye nekhwalithi yendawo yomfaniswano kuyo yonke imikhiqizo ngoba umzimba wokuphonsa wenziwa DISA auto wokubumba umugqa.
Imininingwane Yomkhiqizo: I-JT 87A Material: usayizi we-cast iron preseasoned size: 23 * 3.3 Ukupakisha: ibhokisi lesipho noma ibhokisi elinsundu Ukuchazwa komkhiqizo: Ukukhanya okuphelele bushelelezi nekhwalithi yendawo yomfaniswano kuyo yonke imikhiqizo ngoba umzimba wokuphonswa wenziwe ngumugqa wokubumba we-DISA.
Imininingwane Yomkhiqizo: JT 01, JT 01W Material: Usayizi we-cast iron preseasoned: 21 * 15 * 1.8, 25 * 18.5 * 1.8 Ukupakisha: ibhokisi lesipho noma ibhokisi elinsundu Ukuchazwa komkhiqizo: Umphezulu omuhle wekhwalithi kanye nekhwalithi yaphansi yomfaniswano kuyo yonke imikhiqizo ngoba ukusakaza umzimba wenziwa yi-DISA auto wokubumba ulayini.